R & D - Ruizheng Technology Co., Ltd.
Kutsenga Gum zvingoro
Various R & D mabasa kusanganisira Preparation, chigadzirwa kuvhenekwa nzira uye mitemo makemikari zvigadzirwa. boka redu zvikuru agglomeration zivo, unyanzvi hwokugadzira zvinhu, matarenda uye dzimwe itsva okunze, uye anoita zvesayenzi uye kugadzira zvinhu utsanzi ari akapoteredza kudyidzana kwenyika dzepasi pose uye kukurumidza kukura ruzivo upfumi.
boka redu ane wandei tsvakurudzo pamwe zvikwata. Panguva iyoyowo, zvikwata zvedu ine vechiduku vadzidzi doctorate iri rakabudirira, iyo wakavamba tarenda nheyo kukurumidza kukura R & D. The chikwata vakanamatira pfungwa kutevera akanakisisa uye haana kupera, edza kupa dzinodiwa vatengi dzedu zvakanaka unhu chigadzirwa.
We akagadza pamwe emakambani zhinji. Research mumarabhoritari uye maindasitiri nezvigadziko dzakatangwa yose China, kusanganisira headquaters muShanghai, maindasitiri nechigadziko muna Jiangshu, Zhejiang uye hubei. Tine kukwanisa kubudisa zvinhu uyewo kurerutsa kushatiswa kwezvakatipoteredza, zvekuvaka uye simba kudyiwa kuti kugadzirwa.